China Kedu ụdị ọkụ ọkụ bụ isi ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ LED. ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | REIDZ
Kinddị ọkụ dị a isaa ka ọkụ ọkụ a na-enye ya.
Ọnọdụ dị ugbu a: Lightus Austech> Center Center> kinddị ọkụ dị a sourceaa ka ọ bụrụ isi iyi ọkụ ọkụ LED.
Ibe ọkụ ọkụ ọkụ LED bụ ụdị ọhụụ nke oriọna ịchọ mma, nke bụ mgbakwunye maka isi ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ mmiri. Oriọna amamịghe nke nwere ike dochie ụfọdụ nkọwapụta nke ihu ngosipụta na ntụpọ na nsonaazụ elu site na ịgwakọta agba agba. Ikanam isi iyi ọkụ ọkụ akpọrọ isi iyi ọkụ. Isi ọkụ ọkụ ọkụ bụ echiche a na - ahụ anya, iji mee ka nyocha nke nsogbu anụ ahụ dị mfe. Dị ka ụgbọelu na -adịghị mma, isi mmiri, na enweghị mgbochi ikuku, ọ na-ezo aka na isi iyi ọkụ nke na-esite n'otu isi gaa na mbara gburugburu.
Ikanam bụ oriọna dị ọkụ. Workingkpụrụ ịrụ ọrụ ya na ụfọdụ njirimara eletrik bụ otu diodes nkịtị, mana ihe kristal e ji mee ihe dị iche. Ihe ndị a na-ahụ maka ikanam bụ LED dị iche iche na-ahụ anya, ìhè a na-anaghị ahụ anya, laser, wdg. Agba nke na-ekupụ ọkụ nke diodes na-enwupụta ọkụ na-adabere n’ihe ndị eji ya. Ugbu a, enwere ọtụtụ agba dị ka odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, oroma, acha anụnụ anụnụ, odo odo, cyan, ọcha, na agba zuru oke, enwere ike ịme ya n'ụdị dịgasị iche iche dị ka akụkụ anọ na okirikiri. Ikikere nwere uru nke ndu ogologo, obere obere na ibu dị mfe, obere ike ọkụ (ịchekwa ike), ụgwọ dị ala, wdg, na obere ọrụ na-arụ ọrụ, arụmọrụ dị elu, oge nzigharị ọkụ dị mkpụmkpụ, oke igwe ọrụ na-arụ ọrụ, oke ọkụ dị ọcha. agba, na usoro siri ike (nguzogide ujo, nguzogide nke oke), oru oma nke siri ike ma nwekwaa njiri mara nke ndi mmadu.
Thegbọ ahụ nke na-enwu ọkụ dị nso na ebe a na-enwu ọkụ, "idobe oriọna ahụ ka adaba adaba." Agbanyeghị, ọ bụrụ na ejiri ya dị ka nnukwu mpaghara ngosipụta, ugbu a na oriri ike dị ukwuu. A na-ejikarị LEDs maka ngwaọrụ ngosi dị ka ọkụ na-egosipụta, ọwa mmiri dijitalụ, ihe ngosipụta, na ngwaọrụ elele anya nke ngwa elektrik, a na-ejikwa ya maka nkwukọrịta ngwa anya, wdg, yana ịchọ mma nke ihe ngosi, ogige ntụrụndụ, bọọdụ, okporo ụzọ, ọkwa na ebe ndị ọzọ.
Ikanam isi ọkụ ọkụ LED, ọ na-eji otu ọkụ eletrik dị ka isi ọkụ, a na-achịkwa ụzọ ọkụ ahụ site na oghere dị n'akụkụ akụkụ ọkụ na-eweta ọkụ, nke na-enweta ike dị ala, oke ọkụ, mmezi dị ala, na ogologo ndụ. Mgbe nnwalechara nka ji arụ ọrụ, ọ rụzuru ihe achọrọ maka usoro ọrụ aka dị mkpa . Newdị igwe ọkụ ọkụ bekee nke ohuru na-agakọ na oghere dị mma na-enwu ọkụ na isi okwu ọkụ bụ LED bụ ihe ọhụụ dị mkpa na teknụzụ hụrụ.
E jiri ya tụnyere isi iyi ọkụ ọdịnala, ụzọ mgbanaka ọkụ ọkụ LED dị ntakịrị nha na ọkụ n'ịdị arọ. Enwere ike ịme ha ka ha bụrụ ngwaọrụ dị iche iche iji kwadoo nhazi na nhazi nke oriọna na akụrụngwa dị iche iche, na-eme mgbanwe siri ike na oke ngwa. Ezigbo arụmọrụ gburugburu ebe obibi. Ebe ọ bụ na ọkụ ọkụ nke LED adịghị mkpa ịgbakwunye Mercury ọla na usoro a na-emepụta, mgbe a tụfuru LED, ọ gaghị akpata mmetọ nke Mercury, ihe ndị nwere ike ịlagharia, nwere ike ịchegharị naanị, mana ọ na - echekwa gburugburu. Nchekwa ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ isi iyi ọkụ ọkụ ọkụ nwere ike ibuga site na obere ọkụ eletrik dị ugbu a, na ọkụ eletrik na-enye ọkụ eletrik dị n'etiti 6 ~ 24V, yabụ arụmọrụ nchekwa dị oke mma, kachasị mma maka ebe ọha. Na mgbakwunye, n'okpuru ọnọdụ mpụga ka mma, isi ọkụ ọkụ LED nwere nbibi ọkụ na ogologo ndụ karịa ụzọ ọkụ ọdịnala. Ọ bụrụgodi na a na-agbanye ma gbanyụọ ya, ndụ ọrụ agaghị emetụta ya.
Oge nzipu ozi: Ọgọst-04-2020